Gịnị bụ isi peculiarities nke amaokwu Amazon iji mara onye ọ bụla na-ere ebe ahụ?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, amaokwu Amazon na-abụkarị ụdị arịrịọ ndị ahụ na-agagharị agagharị na Google na search bar. N'ihi ya, ha na-aga ịhụ ma ọ bụ ibe ma ọ bụ nchịkọta rịzọlt nke gosiputara na ịbanye ụfọdụ ajụjụ nyocha. Ọ dị mkpa ka ọtụtụ n'ime webmasters na ndị na-ere ahịa n'Ịntanet mara nke ọma na ọ dị mkpa ka ha jiri aka ha mee nchọpụta nke ọma, ma ọ dịkarịa ala ndị na-agba ọsọ na ụlọ ahịa na-echekwa, ma ọ bụ ihe atụ ndị na-ewu ụlọ - comparar servidores web. Naghị ekwu na eleghị anya, SEO niile ruru eru ewerewo ya - enweghị ihe ọ bụla - ọdịnaya bụ mgbe eze, mgbe ọ na-abịa n'ịdị mma maka ọchụchọ. Na ikike ịhọrọ isiokwu, tinyere ihe ha na-eji azụmaahịa kwesịrị ekwesị bụ kpọmkwem ihe na-eme ka ihe ịga nke ọma nke ọ bụla na-arụ ọrụ n'ịntanetị ọ bụla, n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ bụ ya mere m ga-eji kwenye na ndị ahụ na-ere ahịa na-ekwu na mgbe ọ na-abịakwute amaokwu Amazon, nchọpụta dị omimi nke ọma na-emekarị ihe dị ka pasent 80% n'ime mgbalị ha zuru ụwa ọnụ, ebe ọrụ fọdụrụ ha fọdụrụ bụ ihe dịka pasent 20.
Ihe Mmasị Dị Mkpa na Dị Oké Ọnụ Ahịa
N'ikpeazụ, isiokwu mkpirisi ọlaedo pụtara iji bụrụ ihe ndị dị oké ọnụ ahịa dị n'ọhụụ nke ọ bụla ecommerce ọ bụla ere. O doro anya na e nyere ndị dị otú ahụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị aka ịmata ya ozugbo na ihe niile - isiokwu mkpirisi ọlaedo bụ kpọmkwem ihe na-eme ka mgbanwe ha dị elu karị. N'ikpeazụ, a na-atụ anya na isiokwu ndị a ga-eme ka ha nweta ego. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịmara banyere atụmatụ anọ ha nwere.
Isi ihe anọ nke Amazon Golden Keywords
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-atụgharị mkpụrụ okwu ọlaedo iji nwee ike inye ikikere oke nke okporo ụzọ ọchụchọ na ngwaahịa gị. Ma, rịba ama, okwu ndị dị otú a chọrọ ka ị kwadoro asọmpi kwesịrị ekwesị - naanị iji mee ka o kwe gị omume ịkwado ha maka udo. N'aka nke ọzọ, mkpuru okwu edo ọ bụla aghaghị inwe ụdị azụmahịa siri ike ka o wee mee ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa na-azụliteghị ego na njedebe njem ha iji ghọọ ezigbo ndị na-azụ ahịa.
Search Mpịakọta - enwere ike ịchọta ya na Google's Keyword Planner dị mma. Ngwá ọrụ a bụ nhọrọ kachasị mfe ịmalite ịchọta ọchụchọ Amazon dịka ụzọ kachasị mma.
Nchịkọta Mkparịta ụka - a ga-ejikwa aka gị edozi ya, ma ndị na-asọmpi gị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ ntanetị ederede nke software dị ka Long Tail Pro, Merchant Keywords, ma ọ bụ Jungle Scout. Ha niile dị mma inyere gị aka na ọrụ ahụ. Ya mere, ọ bụ naanị gị onye ị ga-ebu ụzọ mee.
Nchọgharị Nchọpụta - pụtara na mkpụmkpụ okwu ọchụchọ dị ala nwere ike mgbe ụfọdụ ibu ibu dị arọ karị, n'ihi nke a na-enwe ike karie okwu nke uru, karịa ihe ọ bụla ọzọ Amazon chọrọ iji nweta ya.
Usoro ngwa ngwa - na-ejikarị ndị ahịa nwere ike ịbịaru mkpebi ikpeazụ ha mere ịzụta. Dịka ọmụmaatụ, tupu ịwụnye ihe a họpụtara gaa na ụgbọ, ọtụtụ n'ime anyị na-enyocha ya ugboro ugboro, oge a ejikọta arịrịọ ọchụchọ gara aga na ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a dị njikere ịzụta dị ka "kachasị mma", "kachasị elu", " àgwà "," ebee ka m nwere ike ịzụta "," kachasị mma ", wdg.